February 2022 - Channel Lover
ယောကျာင်္းလေးတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို တကယ် ချစ်လားမချစ်လား စမ်းသပ်နည်းများ..
ယောကျာင်္းလေးတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို တကယ် ချစ်လားမချစ်လား စမ်းသပ်နည်းများ ( ၁ ) မျက်ခွက်ကို လက်ဝါး နဲ့ ၁၄ ချက်လောက် ဘယ် ပြန် ညာ ပြန် ဆင့်တွယ် ကြည့်ပါ ။ အား ပါ ပါစေ( တစ်ချက် ကလေး မှတောင် ဒေါသ မထွက်ဘူး ဆိုရင် သေချာတယ် အဲ့ဒီ့ ယောကျာင်္းလေး အချစ်က အချစ်စစ် အချစ်မှန် ) ( ၂ ) နှာနုရိုး တည့်တည့် လက်သီးနဲ့ စိတ်ရှိလက်ရှိ ထိုးပါ ။ သွေးထွက်ပါစေ( ယောကျာင်္းလေး ဆိုတာ ကိုယ့်အသား နာရင် ခွေးတောင် ပြန်ကိုက် တတ်ကြတဲ့ သူတွေပါ သို့သော် … Read more
ယူကရိန်း ရုရှား အရေးကြောင့် ယနေ့ တနလ်ာနေ့ က စပြီး ကမ္ဘာမှာ ဖြစ်လာနိုင်တော့ အဖြစ်ဆိုးများ…. ရုရှား ဘဏ်များအား Swift code အသုံးပြုခွင့်မရတာကြောင့် ရုရှား၏ impory &export လုပ်ငန်းအများစုရပ်တန့်သွားမယ်။ ထို့အပြင် ရုရှား၏ ပြင်ပမှာထားတဲ့ အရံငွေ ဒေါ်လာ ၆၆၀ ဘီလီယံကို freeze လုပ်တော့မှာဖြစ်၍ ရုရှား ငွေကြေးဖြစ်တဲ့ ရူဘီးဟာ တန်ဖိုးပြိုကျမယ်။ ရူဘီးငွေတန်ဖိုးပြိုကျမယ်ဆိုရင် ရုရှားမှာ import လုပ်ရတဲ့ ကုန်တွေ ပစ္စည်းဈေးတက်မယ်ဆိုပါတယ်။ ဒါတ်ုရင်ရုရှားတွေဟာ ဘဏ်ကငွေတွေအကုန်ပြန်ထုတ်ကြမှာဖြစ်၍ ဘဏ်တချို့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်။ အခန့်အသင့်ရင်ပြိုကျနိုင်တယ်ဆိုတယ်။ ထို့အပြင်ရုရှားဗဟိုဘဏ်မှာစုထားတဲ့ အရံရွှေ တွေကို ထုတ်ရောင်းဖို့လည်း swift code ဖြင့်ပေးချေတာတွေလိုတာဖြစ်၍ ရုရှားဟာ သူ့ငွေကြေးကိုကျားကန်ပေးဖို့ခက်မယ်ဆိုပါတယ်။ ထို့အတွက် ရုရှားမှာ financial problem … Read more
၂၀၂၂ မတ်လ ၂ရက်နေ့တွင်မီးသတိပြု 🔥⚠⚠⚠⚠⚠⚠
မီးသတိပြု 🔥⚠⚠⚠⚠⚠⚠ ၂၀၂၂ မတ်လ ၂ရက်နေ့တွင် မကွေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်းနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းတွေမှာ လေထန်နိုင်ပြီး နေ့အပူချိန်များတိုးလာနိုင်သဖြင့် မီးသတိပြုကြပါ ခန့်မှန်းချိန် 28/02/2022 at 7:43pm(MMT) ပြည့်သူ့အချစ်တော်လေး Su Su San 𝘾𝙡𝙞𝙢𝙖𝙩𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙨𝙩 𝘼𝙙𝙫𝙖𝙣𝙘𝙚𝙙 𝙒𝙚𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙁𝙤𝙧𝙚𝙘𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 unicode မီးသတိပွု 🔥⚠⚠⚠⚠⚠⚠ ၂၀၂၂ မတျလ ၂ရကျနတှေ့ငျ မကှေးတိုငျး မန်တလေးတိုငျးနှငျ့ စဈကိုငျးတိုငျးအောကျပိုငျးတှမှော လထေနျနိုငျပွီး နအေ့ပူခြိနျမြားတိုးလာနိုငျသဖွငျ့ မီးသတိပွုကွပါ ခနျ့မှနျးခြိနျ 28/02/2022 at 7:43pm(MMT) ပွညျ့သူ့အခဈြတျောလေး Su Su San 𝘾𝙡𝙞𝙢𝙖𝙩𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙨𝙩 𝘼𝙙𝙫𝙖𝙣𝙘𝙚𝙙 𝙒𝙚𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙁𝙤𝙧𝙚𝙘𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 မီးသတိပွု 🔥⚠⚠⚠⚠⚠⚠ ၂၀၂၂ မတျလ ၂ရကျနတှေ့ငျ မကှေးတိုငျး မန်တလေးတိုငျးနှငျ့ စဈကိုငျးတိုငျးအောကျပိုငျးတှမှော … Read more
ကျောက်ဖရားမြစ်ထဲ ပြုတ်ကျသေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ ထိုင်းမင်းသမီး တန်မိုရဲ့အမှု့အကြောင်း(ရုပ်သံ)
သံသယဖြစ်စရာ မေးခွန်းတွေနဲ့ ကျောက်ဖရားမြစ်ထဲ ပြုတ်ကျသေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ ထိုင်းမင်းသမီး တန်မိုရဲ့အမှု့အကြောင်း(ရုပ်သံ) ကျောက်ဖရားမြစ်ထဲမှာ စပိဘုတ်စက်လှေစီးရင်း မြစ်ထဲ ပြုတ်ကျသွားခဲ့တဲ့ ထိုင်းမင်းသမီး တိုင်မိုရဲ့အလောင်းကို နှစ်ရက်အကြာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့ နေ့လယ်မှာ ထိုင်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ် ထိုင်းမင်းသမီး တိုင်မိုနိဒါးဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ ညပိုင်းက ကျောက်ဖရားမြစ်ထဲမှာ သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းငါးဦးနဲ့အတူ စပိဘုတ်စက်လှေစီးရင်း မြစ်ထဲ ပြုတ်ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီး တိုင်မို မြစ်ထဲ ပြုတ်ကျသွားတဲ့ ညမှာပဲ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေက ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၃၈ နာရီအကြာ ဒီနေ့ နေ့လယ် ၁ နာရီ၁၀ မိနစ်ကိုရောက်မှ အလောင်းကို ရှာတွေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြည်ပ သတင်းဌာန တချို့ရဲ့အဆိုအရ … Read more
၁ ရက်နေ့ ၃လပိုင်း၂၀၂၂ အတွက် ကိုရင်လေးပေးတဲ့ ကံကောင်းစေမယ့် ထိုင်းထီ ၆ လုံးဂဏန်း
၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လ ၁ရက်နေ့ အတွက် ၂ လုံး ၃လုံး ၆လုံး ထီဂဏန်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေအတွက် ထီဆိုင်သို့ ထီပြေးဝယ်ရင် အဆင်သင့်ပြင်ထားကြပါ။ မတ်လ ၁ရက်နေ့ ၂၀၂၂ အတွက် ကိုရင်လေး ပေးတဲ့ ကံကောင်းစေမယ့် ထီဂဏန်းကတော့ သုံးလုံးဂဏန်း 906 – 061 နှစ်လုံးဂဏန်း 06 – 61 – 17 ထိုင်းထီထိုးကြတဲ့ ၇ ရက်သားသမီးများအားလုံး ထီဆုကြီးများ ပေါက်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်…. credit# ၂၀၂၂ ခုနှဈ မတျလ ၁ရကျနေ့ အတှကျ ၂ လုံး ၃လုံး ၆လုံး ထီဂဏနျးစိတျဝငျစားတဲ့ သူတှအေတှကျ ထီဆိုငျသို့ ထီပွေးဝယျရငျ အဆငျသငျ့ပွငျထားကွပါ။ မတျလ ၁ရကျနေ့ … Read more
ဗန်ဒါသီးစေ့ အကြောင်းသိကောင်းစရာ မြန်မာပြည်က ဗန်ဒါပင်တွေ ရွှေဖြစ်ပြီ
ဗန်ဒါသီးစေ့ အကြောင်းသိကောင်းစရာ မြန်မာပြည်က ဗန်ဒါပင်တွေ ရွှေဖြစ်ပြီ မြန်မာပြည်မှာ ဗန်ဒါပင်(ဗန်ဒါသီး)လို့အလွယ်ခေါ်လေ့ရှိတာကြောင့်၊“ဗာဒံပင်” ဆိုတဲ့ သူ့မူလအမည် ပျောက်ကွယ်နေပါတယ်။အင်္ဂလိပ်အမည်ကတော့ Indian Almond ပါတဲ့။ ဗာဒံစေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူနဲ့တည့်တယ်၊ ကျန်းမာရေးကောင်း တယ်၊ အသားအရေကို ကောင်းစေတယ်စတဲ့အခြေခံ ဗဟုသုတလောက်တော့လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ သို့သော် ဗာဒံစေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေ ဘယ်လောက်တောင်များပြားတယ် ဆိုတာသိနိုင်ကြပါစေရန် မျှဝေရေးသားလိုက်ရပါ တယ်။ ဗာဒံပင်ကအကြီးမြန်ပြီး၊အရွက်တွေ ကလည်းတဆင့်ပြီးတဆင့် အတက်မြန်တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရိပ်ရအပင်အဖြစ် စိုက်ပျိုးလေ့ရှိကြပါတယ်။ အပင်ကိုပေါပေါများများမြင်တွေ့နေရတာရယ်၊ အပင်အောက်မှာ ကလေးငယ်အချို့ကြွေကျလာတဲ့ အသီးကို အုတ်နီခဲအကျိုးဖြင့် ထုခွဲစားနေကြတာရယ်ကြောင့် အရိပ်ရပင်မှရတဲ့အစေ့ရဲ့ကျန်းမာရေးတန်ဖိုးကို သတိမမူမိကြပါ ဘူး။ ယနေ့နိုင်ငံ တကာမှာတော့ ဗာဒံစေ့နဲ့ ၎င်းမှရတဲ့အဆီကို တန်ဖိုးထားစားသုံးနေကြပါပြီ။ ဗဟုသုတအနေဖြင့် မျှဝေရပါလျှင် ဂရိ နိုင်ငံရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာ ဗာဒံစေ့ကို “wedding sweets” အဖြစ်အထူးတလည်ဧည့်ခံနေကြပါတယ်။ … Read more